रोचक खबर Archives - पिटि अनलाईन न्यूज
धुलिखेल। बैवाहिक समारोहमा को–को सेलिब्रिटी गएभन्दा पनि को को गएनन् भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।सुपरस्टार अनमोल केसी र सुहाना थापा परिवारसहित एकसाथ विवाहमा आएका थिए । भुवन केसी, झरना थापा, सुनील...
सिन्धुपाल्चोक प्रनिशा तामाङ। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीमा सोमबार देखि मंगलबार सम्म नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघले २ वाट गाउँपालिका र १ नगरपालिका लाई निशुल्क तालीम दिएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका, पाँचपोखरी गाउँपालिका, मेलम्ची...
दाङको तुल्सिपुरमा २ वटा महोत्सव लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरुको बिरोध
पिटिअनलाईन समाचारदाता / दाङ । तुलसीपुरमा लगाउन लागेको मेला महोत्सवको बिरोधमा फेन्सी व्यवसायी लगायत व्यवसायीहरुले विरोध र्‍याली निकाल्नुका साथै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ...
अन्ततः अभिनेता निखिल उप्रेतीले जेठी श्रीमती कोपिला उप्रेतीसँग सम्बन्ध विक्षेद गरे
अभिनेता निखिल उप्रेतीले जेठी श्रीमती कोपिला उप्रेतीसँग सम्बन्ध विक्षेत गरेका छन् । अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेलसँग दोस्रो विवाह गरेपछि जेठी श्रीमतीबाट अलग बस्दै आएका उनको गत भदौ १ गते भक्तपुर जिल्ला...
पहिलो पटक यौ’न सम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? महत्त्वपूर्ण जानकारी
पहिलो पटक यौ'न सम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ। नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौ'नसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध...